Fepetran'ny serivisy | Pharmacy RXS
Aprily 17, 2020 2020-04-17 2:19
2 Fepetra sy politika:
2.1 Fepetra fototra
2.2 Zo sy fameperana
Ny mpivarotra dia milaza mazava tsara fa ny fiantohana rehetra dia azo ekena na misy fiantohana ara-barotra na ara-batana ho an'ny tanjona manokana. Ity fandavana ataon'ny mpivarotra ity dia tsy misy fiatraikany amin'ny fehezan-dalan'ny mpanamboatra raha misy. Ny lohatenin'ny entana izay vidiana eto dia tazomin'ny mpivarotra mandra-pandoan'ny entana feno ny mpividy ary amin'io fotoana io dia ampitain'ny mpividy. Raha ny entana novidina dia novidiana ho an'ny fanondranana, ny mpividy dia tsy maintsy mahazo amin'ny antonta-taratasy fanondranana sasany alohan'ny fandefasana azy any amin'ny firenena vahiny. Ho fanampin'izany, ny fiantohana ataon'ireo mpanamboatra ho an'ny entana aondrana dia mety miovaova na foana ary foana. Raha manana fanontaniana ianao dia manontania. Ny andraikitra rehetra sy ny trosa rehetra dia ho an'ny vokatra novidina ihany.
Fepetra sy politika:
Ho an'ny vidiny sy ny vokatra rehetra, dia zonay ny manao fanitsiana noho ny lesoka, ny fiovan'ny toetran'ny tsena, ny fampitsaharana ny vokatra na ny lesoka an-tsoratra amin'ny dokambarotra. Allegro dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fiovan'ny vidin'ny mpanamboatra, izay mety hitranga amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampandrenesana. Ireo sarin'ny vokatra eto amin'ity tranonkala ity dia mety tsy taratry ny vokatra azonao. Mety hisy ny fanitsiana ny endrika sy ny fiovaovan'ny loko.
Azafady mba tazomy ny fitaovam-panangonana sy ny antontan-taratasy rehetra raha toa ka tsy maintsy arotsaka na haverina ny fitaovanao. Alohan'ny hamerenanao ny vokatra rehetra dia tsy maintsy mahazo nomeraon'ny Autorisation Return (RMA) ianao. TSY misy fiverenana, na inona na inona karazany, ho ekena raha tsy misy isa RMA. Azafady azafady an-tanana ity fampahalalana manaraka ity rehefa miantso nomera RMA: anaran'ny mpanjifa, nomera faktiora, nomeraon-telefaona ary ny toetran'ny olana
Zo sy fameperana
Ny mpikambana dia tokony ho 18 taona farafahakeliny.
Ireo mpikambana dia omena zana-potoana voafetra, tsy ankanavaka, azo esorina, tsy azo esorina ary tsy azo zahana hiditra ao amin'ilay ampahan'ny lalam-pifandraisana mifandraika amin'ny fividianana.
Ny ampahan'ny fampianarana an-tserasera mifandraika amin'ny fividianana dia ho azon'ny Mpikambana raha toa ka ny orinasa no mitazona ny làlana, izay farafahakeliny herintaona aorian'ny fividianan'ny mpikambana.
Ireo horonan-tsary ao amin'ilay Mazava ho azy dia omena ho toy ny stream video ary tsy azo sintonina.
Amin'ny fanekena hanome izany fidirana izany, ny orinasa dia tsy manery ny tenany hitandrina ny làlana, na hitazona azy amin'ny endriny ankehitriny.